ENGLISH FOR COMPUTERS - 2
A simple electronic valve contains two electrodes.They are metal conductors that are attached toacircuit at one end only and either receive or give out free electrons.They are called thermionic valves.An electronic valve works by passingastream of electrons fromaheated cathode or negative electrode to anode or positive electrode.There are two types of thermionic valves : diodes and tri-odes.
The diode is used as the detector of radio waves.The resonant circuit,consisting of an inductance andacapacitor,serves to selectaspecific frequency.This is the simplest radio receiver realisable withavacuum tube.To operatealoudspeaker,the signal must be amplified.
အဆို့များသည်​ အဘယ်​နည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အီလက်​ထ​ရောနစ်​အဆို့တွင် ​အီလက်​ထရုတ် ​နှစ်​ခု ပါဝင်​သည်​။ အီလက်​ထရုတ်​ဟူသည်​မှာ လျှပ်​စစ်​စီးရန် ​စီမံထား​သော သတ္တုပစ္စည်းဖြစ်​သည်​။ ၄င်းတို့ကို လျှပ်​စစ်​ကွန်ယက်​တစ်​ခု၏ ​တစ်​ဖက်​တည်းတွင်​ တပ်​ဆင်​ထားသည်​။ ၄င်းတို့သည် လွတ်​လပ်​​သောအီလက်​ထရွန်​အမှုန်​က​လေးများကို လက်​ခံ​သောအလုပ်​ သို့မဟုတ်​ လွှင့်​ထုတ်​​သောအလုပ်​ကို လုပ်​သည်​။ ၄င်းတို့ကို သာမီအိုနစ်​အဆို့များ ဟု​ ခေါ်သည်​။ အီလက်​ထ​ရောနစ်​အဆို့၏ ​အလုပ်​အလုပ်​ပုံမှာ အပူ​ပေဒ​သော ကက်​သုတ်​အမည်​ရှိပြွန်​​ချောင်း သို့မဟုတ်​ အနှုတ်​အီလက်​ထရုတ်​မှ စီးထွက်​​သော အီလက်​ထရွန်​အမှုန်​က​​လေးများကို အနုတ်​အမည်​ရှိပြွန်​​ချောင်း သို့မဟုတ် ​အ​ပေါင်းအီလက်​ထရုတ်​ဆီသို့ ပို့​ပေးသည်​။ သာမီယိုနစ် ​အဆို့ နှစ်​မျိုး ရှိသည်​။ ၄င်းတိုမှာ ဒိုင်​ယုတ်​ နှင့်​ ထရိုင်​ယုတ်​တို့ ဖြစ်​ကြသည်​။
ဒိုင်​ယုတ်​ဒိုင်​ယုတ်​သည် ​ရေဒီယိုလှိုင်းများကို ဖမ်းရာတွင်​သုံး​သော အဆို့ဖြစ်​သည်​။ ၄င်းတွင်​ပါဝင်​​သော ပစ္စည်းများသည်​ လိုချင်​​သော​ရေဒီယိုလှိုင်းကို ​ရွေး​ပေးသည်​။ ၄င်းသည် ​​လေဟာနယ်​ပြွန်​​ချောင်းဖြင့်​ပြုလုပ်​​သော​ ရေဒီယိုလှိုင်းဖမ်းစက်​များတွင်​ အရိုးဆုံး အရှင်းဆုံးဖြစ်​သည်​။
အကယ်​၍ အသံချယ့်​စက်​ကို သုံးမည်​ဆိုလျှင်​ သုံးနိုင်​​အောင်​ချဲ့ထွင်​၍ သုံးနိုင်​သည်​။
Language Notessimple(adj) - ရိုးသားရှင်းလင်း​သော
valve (N) - အဆို့
conduct (v) - လျှပ်​စစ်​စီးသည်​
conductor (N) - လျှပ်​စစ်​စီး​သောအရာ
work (v) - အလုပ်​လုပ်​သည်​
detect (v) - ရှာ​ဖွေ​တွေ့ရှိသည်​
detector (v) - ရှာ​ဖွေ​သောအရာ၊ ဖမ်းစက်​
receive (v) - လက်​ခံသည်​
receiver (N) - လက်​ခံ​သောအရာ
wave (N) - လှိုင်း
circuit (N) - လျှပ်​စစ်​ကွန်​ယက်​။ ဆားကစ်​
serve (v) - အသုံးဝင်​သည်​
Specific (adj) - တိကျ​သော
receiver (N) - လက်​ခံ​သောအရာ၊ ဖမ်းစက်​။
realise (v) - ရသည်​
realisable (adj) - ရနိုင်​​သော
Vacuum (N) - ​လေဟာနယ်​။ ​လေမရှိ​သောနယ်​
amplify (v) - တိုးချဲ့သည်​
loud speaker (N) - အသံချဲ့စက်​
amplifier (N) - တိုးချဲ့​သောအရာ
grid (N) - ​လေး​ထောင့်​ကွက်​
Result (v) - ဖြစ်​​ပေါ်​စေသည်​
resist (v) - ခုခံသည်​
resistor (N) - ခုခံ​သောအရာ အထူးသဖြင့်​ လျှပ်​စစ်